lundi, 13 mai 2019 21:04
Ambarijeby Sud: Tonga maro hihaino an'i Soafilira Princia zanak'Analalava
Vory marobe ny mponin'Ambarijeby Sud, Distrikan'Analalava andeha hihaino, ankahery ary hanohana an'ity zanaka vavin'Analalava ity.
Namafisin'i Princia Soafilira, Kandida ho solombavambahoaka eto Analalava, nilatsaka amin'ny anaran'i Malagasy Tia Tanindrazana (MATITA), mitondra ny laharana faha 06 amin'ny bileta tokana, fa ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra, ny fambolena, sy fiompiana, ny jono no laharam-pahamehana iadiany ho an'ny faritra Analalava.
lundi, 13 mai 2019 20:22
Tarika VHF: Nodimandry i Parfait
Mpamoron-kira sady mpanorina ny tarika VHF (Vavaka sy Hira Fiderana) i Parfait Lalanirina. Tao amin'ny pejy VHF Ofisialy ny tarika no nampahafantatra fa nodimandry androany i Parfait.
lundi, 13 mai 2019 19:59
Ampamatanana Androndra: Manohana ny tanora i Rastany
Mampiavaka an'i Randrianarisoa Stanislas na Rastany, kandida narotsaky ny antoko Tiako I Madagasikara - K25, mitondra ny laharana faha 9 amin'ny bileta tokana, ny fanohanany ny tanora sy ny fanatanjahantena.
Tsy vao izao izy no nanampy ireto tanora ireto, ka nanolotra fitaovana sy kopy nandritra ny fifaninanana natao teto Ampamatanana Androndra, Boriborintany faha II.
Ambohitsoa: Tsy mamela anareo irery aho hoy i Lanto Rakotomanga
Nitohy taty Ambohitsoa indray ny fitetezana ny Boriborintany faha II nataon'ny kandida laharana 01, Lanto Rakotomanga izay lisitra natolotry ny antoko politika, Isika rehetra miaraka amin'i Andry Rajoelina, ato amin'ny Boriborintany faha II.
Tonga maro be ireo mpiaradia aminy, nanontrona izany fotoana izany. Nijery ireo be antitra izy, ary nitondra fanampiana ho azy ireo, teo ihany koa ny fanomezana izay natolony ho an'ny tanora, toa ny baolina.
Raha ny resaka nataony dia nahavelom-panantenana ireo nanatrika ny fihaonana.
lundi, 13 mai 2019 18:51
Irmah Naharimamy: Nisafidy azy Toamasina
Maro ny hetsika teto Toamasina ny faran'ny herin'andro teo, fa dia nazava ny safidy raha ny teto Toamasina I no jerena.
Nirohitra namonjy nanontrona sy niaraka tamin'i Kandida ho solombavambahoaka Irmah Naharimamy, natolotry ny antoko politika Isika rehetra miaraka amin'i Andry Rajoelina, laharana faha 8, ny teto Toamasina I.
Ny fiarahantsika marobe manao an'izao hoy Irmah Naharimamy no porofo fa hiraka ampandroso an'ity Toamasina ity isika.
lundi, 13 mai 2019 18:46
Manakara: Nalai-misaraka ny olona nanohana an'i BEBOARIMISA Ralava
Tontosa ny 11 mey ny fanokafana ny fampielezan-kevitra hoan'i Zanaky Manakara BEBOARIMISA Ralava, kandida ho solombavambahoaka avy amin'ny antoko Banjino ny Repoblika - BR, mitondra ny laharana faha 2 amin'ny bileta tokana.
Feno olona tanteraka ny kianjan'ny Demokrasia Manakara.
Na dia efa nandroso maizina aza ny andro dia tsy nisy niala ny olona fa niandry ny lahatenin'i Kandida BEBOARIMISA Ralava. Nandritra izany no nanolorany ireo mpiray lisitra aminy. Ary koa nanazavany ny vina sy ny foto-kevitra ijoroan'ny antoko dia ny 3F : Firaisan-kina, Fifanampiana, Fifanajana.
lundi, 13 mai 2019 16:56
Fiangonana Advantista: Hetsika ara-pahasalamana
Nanatanteraka hetsika lehibe androany izay hitohy rahampitso talata 14 mey, ho fitsinjovana ireo sahirana ara-pahasalamana ny Fiangonana Advantista.
Fizahana sy fitsaboana maimaim-poana, toy ny diabeta, maso, fitiliana ny otrik'aretina VIH ary ny fanomezan-drà maimaim-poana no atao amin'izany.
Izany moa dia notanterahina tetsy amin'ny parvis Analakely.
lundi, 13 mai 2019 16:37
Fiarovana: Tonga hanovo traikefa ny Nizeriana
Nanao fitsidihana ara-pomba ofisialy tao amin'ny biraon'ny Jeneraly Talen'ny Kabinetran'ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena ireo solotenan'ny Sekoly Etamajaoro Nizeriana.
Hitsidika ireo Sekoly miaramila rehetra eto Madagasikara ihany koa izy ireo mba hakàna traikefa mikasika ny Fiarovana, ny fandriam-pahalemana sy ny toetr'andro ary ny toekarena.